October 25, 2011 at 3:12 pm2comments	မရွှေမိချစ်ခင်ရတဲ့ အစ်မကြီးမမေမေကြည် ရေးထားတာကို အရမ်းသဘောကျလွန်းလို့ ခွင့်တောင်းပြီး တင်လိုက်တာပါ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာတွေကိုလဲ စုပြီးသိမ်းထားပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်။🙂 သူလိုမိန်းမများ
ကျွန်မ စာဖတ်တာကို တော်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဖတ်လိုစိတ်ကလဲရှိ ဖတ်ဘို့ကလဲအား ဖတ်ခြင်း ကိုလဲအားပေးခြင်းခံတဲ့ သူအဖို့ စာဖတ်ခြင်းဟာ စိတ်နေသဘောထားကို ဘယ်လောက် ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ဆိုတာ စေ့စေ့တွေးလေ ပေါ်လာလေလေပါဘဲ။ မသိစိတ်ကို လွမ်းခြုံမှုများ ရှိခဲ့တယ်။ စာဖတ်သူတဦး အနေနဲ့ကတော့ သူတို့စာတွေကိုဖတ်ရလို့ ကျွန်မ ဘယ်လို အာရုံမှတ်ထင် စွဲဝင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်မ စိတ်အာရုံကို အထူး သိမ်းပိုက်ခဲ့လေတဲ့ ၀တ္တုတို ၀တ္တုရှည်တွေများ အကြောင်းတွေးရင် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးက ထိပ်ဆုံးက ပေါ်လာပါတယ်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ သူ့အကြောင်းက တိုင်းသိပြည်သိ ကမ္ဘာသိ အားလုံးသိဆိုတော့ သူ့စာအကြောင်း သူ့အကြောင်း ဘာပြောစရာ လိုတော့မလဲ။ လူတိုင်းသိကြတာပါဘဲ။ သူ့စာအုပ်တွေ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ဖတ်လဲ ဘယ်တော့မှ မရိုးဘူး။ အသက်ရလာတော့မှ သူ့စာအုပ်တွေထဲက သူ့တိမ်းညွှတ်မှုတွေကို မြင်လာတော့တယ်။ တကယ် ရှာမှရှားတဲ့ အမျိုးသမီးပါ။
သူ့အကြောင်းကို မြသန်းတင့် ရေးထားတာတခု မှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိတယ်။ သူ ဒေါ်မမလေး စ သိတော့ အ၀တ်အစား အများကြီးရှိတာတွေ့လို့ စိတ်ထဲ နှာခေါင်းရှုံမိတယ်ပေါ့။ ခင်ဗျား ကုန်အောင်မှ ၀တ်နိုင်လို့လား။ သူများ ၃ ၄ ၅ ထည်နဲ့ နေနေရတယ်လို့လဲ ထုတ်ပြောတယ်။ ဒါကို ဖတ်မိတော့ သူ အ၀တ်အစားအသိမ်းအဆည်း အင်မတန် စေ့စပ်တာကို ကျွန်မက သတိပြုမိတယ်။ ထမိန်တွေ ရာချီ ထိမ်းသိမ်းထားတာ လွယ် မှတ်လို့။ တချို့အမျိုးသမီးတွေများ ပေါ်သမျှဝယ် ရိုးရင် ပစ် ဘယ်ချောင်ကပ်နေမှန်း မသိ။ ပေါ်သမျှသာ ၀ယ်နေတာ။ လက်ထဲ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းလဲ မရှိ။ အဟောင်းရောင်းပြီး အသစ် ၀ယ် ၀တ်သူကရှိသေး။ အပုံကြီး ကွာပါတယ်။
မမလေးဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး သိပ် Capable ဖြစ်တဲ့မိန်းမလို့ သိန်းဖေမြင့်က မှတ်ချက်ချသတဲ့။ အိမ်ထောင်ရှင်မဘ၀ စာရေးသူဘ၀ မိခင်ဘ၀ တိုင်းရင်းဆေးဆရာဘ၀ သူ အကုန်လုံး ပိပိရိရိ သေသေသပ်သပ် အောင်အောင်မြင်မြင် ရှိလှတယ်။ အနေအထိုင် အဆင့်မြင့်သလို စိတ်နေသဘောထား အထက်တန်းစား အမျိုးသမီးပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို အထက်တန်းအမျိုးသမီး ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာကြောင့်ရေးတဲ့ သူ့ဇာတ်ကောင်တွေ ပြည့်စုံတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေပါ။ သူတို့လို တို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး တကြော်ကြော် အော် ခဲ့သူများလည်း အချိန်တန်တော့ မိန်းမသားဗီဇ စရိုက်လက္ခဏာကြောင့် ပြောင်းလဲ ခဲ့တာပါဘဲ။ သူခေတ်နဲ့သူဖြစ်လို့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးကတော့ အိမ်တွင်းက အပြင်ထွက်ကြည့်ဘို့ နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့စာ ဖတ်ပြီး သူ့ဇာတ်ကောင်တွေကို နှစ်လိုခဲ့သူကတော့ အပြင်ကနေ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်ပြီး မိသားစုကို ကောင်းစွာ စီမံနိုင်တဲ့ မိန်းမသားဘ၀ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ပြန်ကြည့်ရပါအုန်းမယ်။
May Kyi Share this:FacebookLike this:Like Loading...
Entry filed under: ဂျာနယ်ကျော်မမလေး, Sharing. Tags: .	ခမည်းကြိုး ၊ဆူးပန်းခွေ နဲ့ ခင်ခင်ထူး	ရှာမှရှားတဲ့ သူလိုမိန်းမ	2 Comments Add your own
kay | October 25, 2011 at 4:32 pm
Name was wrong above.( auto type in )😦
kaythweay | October 25, 2011 at 4:30 pm
အိမ်မူ ကိစ္စ ဆိုတာ..တကယ် အရေး သိပ်ကြီးတယ်။🙂